Saturday May 02, 2020 - 11:39:16 in Wararka by Super Admin
Wabiga Shabeelle ayaa bilaabay in uu ku fataho dhul beereedyo baaxad leh oo kuyaal gobollada Hiiraan iyo Sh/dhexe xilli roobab dabayllo wato lagasoo sheegayo gobollada dalka.
Fatahaadda uu sameeyay wabiga shabelle ayaa saameyn ba'an ku reebtay magaalooyin iyo deegaanno katirsan gobollada Hiiraan iyo shabeelaha dhexe.
Boqolaal qoys ayaa isaga barakacay guryahooda kadib markii uu Fatahaad aan horay loo arag sameeyey wabiga Shabelle deegaanno katirsan gobolka Sh/dhexe.
Xilli Roobabka Guga ay ka curteen gobollada dhaca Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya ayuu wabiga shabelle fatahaad sameeyey, khasaara dhanka dhaqaalaha ah ayaa ka dhashay fatahaaddan kadib markii biyaha wabiga ay gooyeen boqolaal beero ah oo dalagyo kala duwan ay ku tacbanaayeen.
Deegaanada uu wabiga Wabiga Shabelle ku fatahay ayaa hoos yimaad degmooyinka Jowhar Beled Weyne,Jalalaqsi iyo Mahaday, dadka deegaanka waxay sheegeen in fatahaadda ay cagta marisay beero aad ufarabadan waxaana khasaaraha ka dhashay fatahaaddan lagu qiyaasayaa malaayiin dollar.
Ugu yaraan Saddex Buq ayuu marwalba ka fatahaa wabiga shabelle balse sanadkan waxaa muuqata in fatahaaddu waqtigeedi kasoo hormartay dhibaatada ugu daran waxay ka jirtaa deegaanada hoos yimaad magaalada Mahadaay oo biyuhu maasheeyeen boqolaal Hiktar oo dhul beereed ah.
deegaanka Iji ee hoos yimaad degmada Jalalaqsi waxaa jabsatay Buq weyn oo laga waraabin jiray beeraha, waxaa la sheegay in biyaha fatahaadda ay gooyeen beero ay ku yiilleen digir iyo sisin waxaana socda dadaallo gaabis ah oo ladoonayo in lagu hakiyo fatahaadda wabiga.
Degmada Mahaday ayaa ah halka ugu badan ee uu wabiga Shabelle ka fatahayo. Buqda Huriwaa oo ka fatahaysa dhinaca Bari ee wabiga Shabeelle ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa ay gaartay dhul ballaaran iyadoo ku qasabtay boqolaal qoys oo xoolo dhaqato ah inay ka barakacaan deegaanadooda.
Tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaad magaalada Beled Weyne ayay fatahaadda wabiga saameysay, dhul beeraadyo ku yiil wabiga Jiinkiisa oo khudaar ubadan basal iyo Yaanyo lagu tacbay ayay fatahaaddu goysay waxaana sidaas ku khasaaray dadkii danyarta ahaa ee jiilaalkii lasoo dhaafay qarash badan geliyay beerahooda.
Fatahaadda wabiga shebelle uu sanadkiiba laba jeer sameeyo ayaa faa'iido iyo khasaara uleh beeralayda iyo xoola dhaqatada, marka koowaad fatahaadda degdegga ah waxay sababtaa khasaara soo gaara beeralayda balse marka si kale loo eego fatahaadda waxaa ka faa'iideysta beeralayda qaar oo beerahoodu ka fogyihiin biyaha waraabka kuwaas oo fursad uhelaya iyo biyaha xaafka loo yaqaan ay dalagyo ku tacbadaan.
Sidoo kale xoola dhaqatada ayaa faa'iida ku qaba biyaha fatahaadda oo doogga iyo cowska ku baxa biyaha wabiga ayay xoolahooda daaqsadaan, si walba oo ay ahaato sanadkan ayaa lafilayaa in soomaalida uu unoqdo xilli barwaaqo kadib abaaro raagay oo waddanka soo maray.
Taliban oo dhulka soo dhigtay diyaarad Drone ah Askar badana dishay.
Iska hor'imaad culus oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee Sh/dhexe.